अभागी अमेरिकी राष्ट्रपति पदका विजेता बाइडन: जसको चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दै गर्दा कार दुर्घटनामा उनको पत्नी नेलिया र छोरीको ज्यान गएको थियो ! » बुद्ध भूमि नेपाल
घरमै आइसोलेसनमा बस्दा सास फेर्न गाह्रो भयो भने के गर्ने ? अपनाउनुहोस् यी ९ उपाय
कोरोना पुष्टि भएका संसद सचिवालयका उपसचिव खनालको अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु
२१ टनको अनियन्त्रित रकेट पृथ्वीतर्फ खस्दै
भारतमा कोरोनाको औषधी बोकेको विमान दुर्घटना
अस्पताल खोज्दाखोज्दै जनप्रतिनिधिको एम्बुलेन्समै मृ’त्यु
बाँकेमा ७ घण्टामा थप ८ संक्रमितको मृत्यु
कोरोना भाइरसको संक्रमणदर तीव्र गतिमा फैलने र संक्रमण भयावह हुने संकेत
मध्यरातमा लुम्बिनी अस्पतालका डाक्टरको चि’त्कार : टुलुटुलु हेरेर नर्स र डाक्टरले केहि गर्न नसकिने यो कस्तो बि’वशता !
अभागी अमेरिकी राष्ट्रपति पदका विजेता बाइडन: जसको चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दै गर्दा कार दुर्घटनामा उनको पत्नी नेलिया र छोरीको ज्यान गएको थियो !
काठमाडौं – अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन्। रिपव्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउँदै अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा बाइडेन निर्वाचित भएका हन्। सिएनएनले पेन्सिलभेनिया राज्यमा उनले जितेको प्रोजेक्सन गर्दै बाइडेनले निर्वाचन जितेको जनाएको छ। सन् १९०० यता सबैभन्दा बढी मतदान भएको निर्वाचनमा बाइडनले सात करोड ३० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् जुन कुनैपनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले हालसम्म प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी हो।
ट्रम्पको लगभग सात करोड छ जुन इतिहासमै राष्ट्रपतीय उम्मेदवारले पाएको दोस्रो ठूलो मतसङ्ख्या हो। मतगणना जारी रहँदा ट्रम्पले आफूले जितेको गलत दाबी गरेका थिए। त्यसपछि उनले दैनिक धाँधली भएको दाबी गरिरहेका छन् तर उनले कुनै प्रमाण दिएका छैनन्। उनको पक्षबाट केही राज्यहरूमा मुद्दा दायर गरिएको छ र शुक्रवार बाइडनले जित्ने सम्भावना देखिएपछि ‘यो निर्वाचन अन्त्य नभएको’ विज्ञप्ति निकालिएको छ।
अमेरिकाभरि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण र मृत्यु बढिरहेको बेला लडिएको यो निर्वाचनमा ट्रम्पले बाइडनले जिते लकडाउन हुने र आर्थिक मन्दी हुने बताउँदै आएका छन्।बाइडनले भने राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न यथेष्ट कार्य गर्न असफल रहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। बाराक ओबामाको आठ बर्षे कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहेका ७८ वर्षीय बाइडन अमेरिकाका सबैभन्दा बढी उमेरका राष्ट्रपति हुनेछन्।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका जो बाइडेनले आफ्नो विजयी सम्बोधनमा एकता र सहकार्यका लागि आह्वान गरेका छन्।गृह राज्य डेलवरको विलमिङ्गटनबाट सम्बोधन गर्दै उनले अमेरिकी नागरिकले आफ्नो आवाज दिएको र त्यो एकता तथा सहकार्यका लागि रहेको बताए।
उनले भने, ‘म गर्वले भन्छु डेमोक्र्याट हुँ, तर राष्ट्रपति म सबै अमेरिकीको बन्ने छु । म सेवा त्यसरी गर्ने छु, जसरी मलाई मत दिनेको गर्छु, उसैगरी विपक्षमा मत दिनेको पनि।’
सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम लिएका उनले भने, ‘हामी विपक्षी हुन सक्छौँ, शुत्र कदापी होइनौँ।’उनले आफूले पनि केही चुनावमा हार व्यहाेरेकाे र त्यसको पीडा थाहा रहेको बताउँदै सेवाका लागि अवसर दिन आग्रह गरे । उनले कसैलाई पनि ‘राक्षसीकरण’ गर्ने समयको अन्त्य गरिनु पर्ने बताए।
सन् १९७२ मा डेलवेरबाट सिनेटर निर्वाचित हुँदा जो बाइडेन केवल २९ वर्षका थिए । तत्कालीन अमेरिकी सिनेटका कान्छा सदस्यलाई ह्वाइट हाउसको ढोका खोल्न थप ४८ वर्ष लाग्यो । जतिबेला २० जनवरीमा राष्ट्रपतिको सपथ हुनेछ, त्यतिबेला बाइडेन ७८ वर्ष पुगिसकेका हुनेछन् । अमेरिकी इतिहासमा बाइडेनजत्तिको पाको उमेरमा कोही पनि राष्ट्रपति निर्वाचित भएको छैन ।
उनको स्पष्ट बोल्ने शैलीको अर्को पक्ष पनि छ।रोबट शैलीमा निकै योजनाबद्ध रूपमा तौलिएर बोल्ने राजनीतिज्ञहरूको भिडमा उनी एक वास्तविक मानिसजस्तो देखिन्छन्। बाल्यकालमा भकभकाउने समस्या स्मरणमा रहेकाले आफूले पढेर बोल्नुका साटो मनका कुरा बोल्न रुचाउने उनले बताएका छन्। खासगरी कामदार तथा मजदुर वर्गलाई बाइडनले आफ्नो स्वतःस्फूर्त भाषणमार्फत् तरङ्गित पारिदिन सक्छन्। भाषणपछि श्रोतासँग उनी हात मिलाउँछन् र फोटो खिचाउँछन् – कुनै रकस्टारले जस्तै।
“उनी मानिसहरूसँग अङ्कमाल गर्छन्, बोल्छन्, छुन्छन् र त्यो सबै वास्तविक हुन्छ। कृत्रिम हुँदैन,” पूर्वविदेशमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका पूर्वउम्मेदवार जन केरीले द न्यूयोर्कर पत्रिकालाई बताए।तर उनको स्पर्श गर्ने बानीलाई लिएर कतिपय प्रश्न उठेका छन्।
बाइडन अन्य राजनीतिज्ञभन्दा सर्वसाधारण जनतानिकट देखिनुमा एउटा कारण भनेको अरूले जस्तै उनले बेहोरेका पारिवारिक शोक हुनसक्छ।सिनेटमा पहिलो चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दै गर्दा भएको कार दुर्घटनामा उनको पत्नी नेलिया र छोरी नाओमीको ज्यान गएको थियो भने दुई छोरा बो र हन्टर घाइते भएका थिए। सन् २०१५ मा ४६ वर्षको उमेरमा मस्तिष्कमा ट्यूमरका कारण उनका छोरा बो बाइडनको निधन भयो। आफ्नो परिवारका त्यति धेरै सदस्य गुमाएका बाइडनप्रति सर्वसाधारण अमेरिकीमा सहानुभूति छ। Source:etajakhabar
कस्तो छ प्रचण्ड पत्नी सिता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था ?, छोरी रेणुले सार्वजनिक गरिन यस्तो तस्वीर-
२९ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:५१
१४ चैत्र २०७७, शनिबार ०८:३६
४ चैत्र २०७७, बुधबार १८:२७
हेलिकप्टरमा ससुराली पुगे मुख्यमन्त्री (४ तस्विर सहित)
३ चैत्र २०७७, मंगलवार १७:१०
म मरेर जाउँला तर देशको सीमा त सधै रहन्छ नि : बलिउड नायिका मनिाषा कोइराला (भिडियो सहित)
२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार १८:०३
२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १५:४९